Shiinaha Aluminium magnesium manganese ah nidaamka saqafka hoose ee soo-saarka iyo Warshad | Yi'an
Cufnaanta gaarka ah ee aluminium magnesium manganese alloy waa 1/3 oo ka mid ah xaashida midabka midabka leh, laakiin noloshiisa adeeggu waxay gaari kartaa in ka badan 3 jeer. Qaab jilicsan iyo balaastik ah awgood, waxaa laga samayn karaa saxan taageere u qaabeysan aluminium magnesium manganese, aluminium magnesium manganese saxan qafiif ah, iwm, kuwaas oo si weyn u buuxiya shuruudaha naqshadeynta ee quruxda iyo adkeysiga saqafka biraha. Sidaa darteed, nidaamka saqafka biraha aluminium magnesium manganese waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa saqafka birta ee garoomada iyo garoomada diyaaradaha, Birta saqafka sare ee tiyaatarka, saqafka birta ah ee dhismaha warshad heer sare ah, dhisme sumcad magaalo, dhisme sokeeye iyo dhismayaal kale oo baaxad weyn.
Faa'iidooyinka aluminium nidaamka saqafka manganese magnesium:
1. Ammaan iyo xasilooni:
Nidaamku wuxuu si wax ku ool ah u yareyn karaa buufiska ka dhashay gudaha
albaabka iyo farqiga heerkulka bannaanka ee xilliga qabow daran adoo riixaya rakibidda nooca T ee taageerada joogtada ah. Shaybaarista saxanka iyo cillad soo noqnoqoshada oo ay keento culeys aan sinnayn ayaa laga fogaadaa.
Nidaamka dusha sare wuxuu qaataa 360 ° duubista iyo dhajinta tiknoolajiyada dhalista ee T-qaabeeya, taas oo hubinaysa xasilloonida iyo hoos u dhigista nidaamka oo aan lahayn wax faraq ah. Kaliya maahan inay xaqiijiso waxqabadka biyaha iyo hawo-mareenka ee nidaamka, laakiin sidoo kale waxay ilaalisaa isku-darka kiimikada ee aluminium-ka aluminium ee waxyeellada soo gaadhay, si ay si fiican ugu ciyaaraan faa'iidooyinkeeda u adkaysiga daxalka.
2. Kuleylka kuleylka iyo waxqabadka dabka
Adoo dooranaya dhumucda ku habboon ee qalabka kuleylka kuleylka, qaabdhismeedka saqafku wuxuu la kulmi karaa heerarka sare ee shuruudaha kuleylka kuleylka leh kaliya hagaajin yar. Isla mar ahaantaana, saxanka nidaamka saqafku wuxuu iska caabin karaa dhimbilo iyo olol, saxanka saqafka birtana wuxuu la kulmi karaa heerka ilaalinta dabka A1.
3. Awood aan codsi lahayn
Baarka barafka waxaa lagu dhejin karaa geeska toosan ee saxanka nidaamka saqafka iyada oo aan la ruxin. Dusha sare ee saqafku ma waxyeelo oo wuu sii jiraa si loo hubiyo waxqabadka xiritaanka. Mashaariicda dayactirka sidoo kale waa kuwo lagu kalsoonaan karo. Saxanka nidaamka saqafku wuxuu leeyahay astaamaha xasiloonida iyo miisaanka hooseeya.
Hore: Nidaamka saqafka sare ee aluminium magnesium manganese
Xiga: Nidaamka sawir-qaadaha cagaaran
Nidaamka ka-hortagga dhicitaanka amniga